Pfingo Top Up လောလောဆယ်မရပါ ။ — MYSTERY ZILLION
Pfingo Top Up လောလောဆယ်မရပါ ။
June 2009 edited July 2009 in Internet & Email
MZ မှ Pfingo အသုံးပြုသူ Member များ သို့....
မနေ ့ညက မှစပြီး အခုအထိ ။
Dr.know ၏ Pfingo Account ကုန်သွားသဖြင့်Top UP Card ၀ယ်ပြီး
Top Up လုပ်ဖို့Pfingo Store ကိုခေါ်ရာ မရဘဲ အောက်ပါအတိုင်းပြန်ကြားပါသည် ။
An error has occurred. Please refresh the page again. HTTP/1.1 200 OK GATEWAY_END: Resource is public***handle webuser authentication=>public page*** GATEWAY_ERROR: ***error*** Content-Length: 152 Date: Tue, 23 Jun 2009 14:35:16 GMT Server: Apache-Coyote/1.1 Connection: close An error has occurred. Please refresh the page again.
ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများကို ကြိုတင်သိရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကြောင်ကြားပါသည် ။
Note... အခြား Pages များခေါ်လို ့ရပါသည် ။
Dr.know wrote: »
ကနေ့4:20 Pm တွင် ပြန်ရပါပြီ ။
သတိပြုရန် > အခုတလောတွင် တဖက်မှ ဖုန်းမကိုင်သော်လည်း ပိုက်ဆံစားသွားပါသည် ။
Dr.know ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်ကိုခေါ်ပြီး စမ်းသပ်ရာ (ဖုန်းမကိုင်ဘဲ)
တခါစမ်း 50 s$ cents ကုန်သွားရပါသည် ။ သတိထား ကြပါ ။
Pfingo အကောင့်က Pfingo software ကို၀င်ရင်မရဘူး.....web မှာ၀င်ရင်တော့ ရတယ်....ဘာလိုနေလဲ....ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိရင်ဖြေပေးကြပါ.......
အကို ့ဆီမှာရောpfingoပြောလို ့ရလား......ကျွန်တော့်ဆီမှာကတော့မရဘူး။မရဘူးဆိုတာက...ဟိုဘက်ကမကြားရတာ။speed ကို reduceလုပ်ထားတယ်ထင်တယ်။transfer rate အရမ်းနဲနေတယ်ထင်တယ်။မနက်လဲမရ၊နေ ့လည်
ဟုတ်ပါတယ်.. ခုတလော pfingo အဆင်မပြေပါဘူး ကျွန်တော်ကြုံတာက.. ဒီလိုပါ.. တဖက်ကပြောသံ အကုန်ကြားနေရပြီး.. ကိုယ်ပြောတာ. ဟိုဘက်က မကြားရဘူးဗျ.. ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသလောက်ကတော့. ISP တွေက..Up Stream ကို လျော့ထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. တခါတခါ pfingo မပြောနဲ့ Gtalk ပြောလို့တောင် အဆင်မပြေပါဘူး.. Up Stream လျော့ထားလို့ ကိုယ်ပြောတာက ဟိုဘက်ကို ရောက်လိုက်မရောက်လိုက်ဖြစ်နေတာပါ.. Up Stream ပုံမှန်ပြန်ရ ရင်တော့ ပြန်ကောင်းလောက်မယ်ထင်တာပဲ.. စုတောင်းကြရတာပေါ့ဗျာ.